Ebube Chukwu: Akụkụ 6 kọwara na ọ pụtara?
Know mara Ihe agha nke Chukwu?
Dika agha, ebe ndi agha choro agha agha puru iche dika uwe aghapube okpu agha, okpu agha iji kpuchido isi ha, ngwa agha na ihe ndi ozo.
En ụwa nke mmụọ, anyị chọkwara ikike agha nke na-echebe anyị ma nyere anyị aka iche nsogbu niile nke nwere ike ibilite na ndụ.
N’okwu Chineke, ọkachasị n’isi ikpeazụ nke Ndị Efesọs, otu n’ime akwụkwọ ozi ahụ Pọl onyeozi dere, na-adụ ndị kwere ekwe niile ọdụ ka ha were ngwa agha nke Chineke lụso ajọ onye ahụ ọgụ wee nwee ike inwe mmeri.
Spiritualwa ime mmụọ na-alụ agha mgbe niile ọ bụ ya mere anyị ga-eji jikere oge niile.
1 Akụkụ nke ụzọ Chineke
1.1 Nke mbụ: Obi udo
1.2 2: Ihe mgbochi obi nke ikpe ziri ezi.
1.3 3: Nkwadebe nke ozi-ọma
1.4 Nke anọ: ọta nke okwukwe na ekike agha nke Chineke
1.5 5: okpu agha nke nzọpụta dị n’agha nke Chineke
1.6 6: Mma agha nke Mmụọ Nsọ n’agha nke Chineke
Akụkụ nke ụzọ Chineke
Ekike agha a gụnyere ngwa ọrụ ime mmụọ nke, iji mara etu esi eji ha, ị ga-ama etu esi eji ha, ọ bụ ya mere anyị ji agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji chebe onwe gị na ngwa agha ime mmụọ.
Nke mbụ: Obi udo
A na-akpọ eriri nke eziokwu dị na Ndị Efesọs 6:14. N’agha na n’oge ochie, ndị agha na-eke eriri iji gbochie uwe ahụ ka ha na-akwado ahụ.
N’uche nke mmụọ, eriri ahụ na-aghọ ihe ọmụma na nchekwa nke na-eme ka anyị guzosie ike, kwenyesie ike na anyị bụ umu chukwu, n’agbanyeghi na onye ojo choro ime ka anyi kwenye.
Iji iji belt nke eziokwu jiri obi anyị ga-ejupụta n'okwu nke Onyenwe anyị, anyị ga-eji ekpere were onwe anyị. Anyị kwesịrị ibi ndụ zuru oke na nke kwụsiri ike n’ụzọ nke Kraịst.
2: Ihe mgbochi obi nke ikpe ziri ezi.
Dị ka ọ dị n’oge ochie, e nwere ogwe-aka, nke ekpuchikwa ihe dị n’ime ya, dịka anyị maara ugbu a dị ka akwa na-egbochi ya.
Ndị agha nke na-eje ije n'ụwa nke mmụọ kwesịrị ịchebe obi anyị pụọ na mwakpo ndị iro niile.
Ihe mgbochi obi nke ikpe ziri ezi na-abụ ihe mkpuchi ahụ nke na-enye anyị Ikpe Ziri Ezi na anyi ga erute site na Jisos na aja o churu maka anyi bu obe nke Calvary.
Iji ya mee ihe nke ọma anyị ga-echeta njiri mara anyị nwere n’ime Kraịst, mara na ekele maka aja ya bụ n’onye ezi omume n’ihu nna nke eluigwe.
Anyị enweghị ike ikwenye ihe onye iro na-agwa anyị ma ọ bụ ebubo ha ma ọ bụ na-echeta ndụ anyị gara aga ma ọ bụ mmehie anyị.
Ndị ahụ bụ atụmatụ nke ajọ onye ahụ imerụ anyị ahụ ma ọ bụ naanị ihe mgbochi obi nke ikpe ziri ezi na-echebe anyị pụọ na mwakpo ndị a.
3: Nkwadebe nke ozi-ọma
Ọ dị ọgụ agha ọ bụla kwesịrị ichebe ụkwụ ya ka ọ ghara ibuso ya agha n'ihi na ndị a bụkwa ebumnuche dị mkpa maka onye iro
Ọ bụrụ na onye agha esighi ike na ije ya, ọ ga - adị mfe iwepụ. Ndị agha aghaghi iji ụkwụ kwụsie ike ma chekwaa onwe ha, n'egbughị oge ma ọ bụ tụọ egwu.
Akpụkpọ ụkwụ nke ozi-ọma ga-eyi efe n’enweghị nsogbu, tụkwasịnụ obi n’ihe Onye-nwe nyere gị, kwụsie ike n’ụzọ.
Jupụta onwe gị udo, ọ joyụ na ịhụnanya ma kwe ka ihe a gbasaa nye ndị gbara gị gburugburu. Nkpako ahu bu ikwusa ihe nile ekere eke ozi oma.
Site na nzọụkwụ dị mma na-elele oge niile ịghara ịbanye n'akụkụ nke ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla dị nkọ nke onye iro nwere ike ịhapụ n'okporo ụzọ. Na-aga n’ihu mgbe niile na n’agaghị ala azụ, na-eto n’alaeze nke Chineke.
Nke anọ: ọta nke okwukwe na ekike agha nke Chineke
N’ebe a Onyeozi Pọl nyefere anyị ntụzi maka iji ọta nke okwukwe. Anyi mara na ọta bu ngwa agha eji enyere anyi aka n’agha ka agha ghara ibuso anyi agha.
N'ime ụwa ime mmụọ anyị chọkwara ọta maka na onye iro na-atụ egwu na, ọ bụrụ na erute anyị, nwere ike imerụ anyị ahụ nke ukwuu.
A na-eji ọta nke okwukwe mee ihe n’ụzọ ziri ezi mgbe a na-eme ka okwukwe anyị sikwuo ike. Maka nke a, anyị gụrụ okwu Chineke, buru ya n'isi, ma kachasị mkpa, tinye ya n'ọrụ.
Ka anyị cheta na okwukwe dị ka akwara nke ọ bụrụ na anaghị egosipụta ya mgbe ahụ na ikuku, ka anyị gosipụta okwukwe ma mee ka o sie ike ka o wee chebe anyị pụọ na mwakpo niile nke ajọ onye ahụ na-awakpo anyị.
5: okpu agha nke nzọpụta dị n’agha nke Chineke
Okpu agha bụ okpu agha na-echebe isi onye agha. Otu ihe dị mkpa na ngwa agha niile.
Uche anyi bu ebe agha di ire ma burukwa ndi iro n'ihi na o na ebuso ya agha n’echiche anyi n’eme ka anyi ghara idi ire ma obu mee ka anyi kwenye ihe ezighi ezi dika okwu nke Onyenwe anyi si di.
Anyị na-eji okpu agha ma ọ bụ okpu agha nke nzọpụta mgbe anyị na-echeta oge niile na a zọpụtara anyị site n'okwukwe na nke ahụ bụ eziokwu a na-enweghị ike ịgbanwe.
Anyi aghaghi ịlụso echiche ọjọọ ọgụ ma were okwu Chineke mee ihe n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya ma gbaghara anyị mmehie anyị niile.
6: Mma agha nke Mmụọ Nsọ n’agha nke Chineke
N'ebe a enwere nnukwu ọdịiche n'ihi na ngwa ọgụ ndị ọzọ bụ iji chebe anyị mana nke a bụ ihe pụrụ iche n'ihi na e kere ya ka anyị wee nwee ike ịwakpo ndị agha nke ihe ọjọ. Site na mma agha anyị nwere ike imerụ ma gbuo onye iro oge ọ bụla anyị chọrọ ịbanye n’ụzọ anyị.
Site na ya anyị ga-agbachitere onwe anyị ma mee ka ìhè dị ka ụzọ anyị si aga, jide n'aka na ọ dị ike na na, ọ bụrụ na anyị maara otu esi eji ya, anyị ga-enweta mmeri.
Iji jiri mma agha nke Mmụọ mee ihe anyị kwesịrị ịdị na-ejupụta n'okwu Chineke n'ihi na mma agha a na-arụ ọrụ mgbe anyị na-ekwu okwu ya. Ọ dị mkpa inwe ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla yana mgbe anyị mere ka ọ baa uru na ndụ anyị.
Cheta na akwukwo nso dika akwukwo ndu di ndu, ma okwu ndia kwesiri inwe ike, ayi aghaghi ime ihe ndia egosiputara.
Akike agha ime mmụọ niile na-arụ ọrụ site n’okwukwe, na-ewusikwa ya ike n’etiti nke ekpere.
Ọ bụrụ na anyị na-agụkwu Okwu ya, anyị ga-enwekwu okwukwe, anyị ga-enwekwa ike iji ngwa agha ahụ rụọ ọrụ nke ọma. Ekpere bu igodo ihe obula, mmekorita anyi na Muo Nso ga enyere anyi aka ibi ndu dika uche nna nke elu igwe si di.